सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, कतिमा हुदैँछ कारोबार ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७८, बुधबार ११:२८
३ कात्तिक, काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएकोमा बुधबार एक सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९१ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको हो ।
छापावाल सुन प्रति १० ग्राम ७८ हजार ३६० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला ९० हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, तेजाबी प्रति १० ग्राम ७७ हजार ९३० रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ ।
बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार २३५ रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार एक हजार २२५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रति १० ग्राम एक हजार ५९ रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ ।
बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घट्याे, तोलाकाे कति ?
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, तोलाको कति ?
बजारमा सुन प्रतितोला ९२ हजारमा कारोबार
साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार १०० मा कारोबार